Safiirka China Moqdisho U Fadhiya Oo Hargeysa Ka Degay - Ilays News
[ January 21, 2021 ] ” Guddidii Msiibada COVID-19 Ka Macaashtay 7M.USD Waa In Lagu Maxkamadeeya…” Xisbiga Waddani + [ Muuqaal ]	Featured
[ January 13, 2021 ] Taariikhda Sarkaalkii Ugu Awooda Badnaa Ethiopia Oo La Dilay + [ Muuqaal ]	Featured
[ January 6, 2021 ] 12 Caruura oo Wadnuhu Dalooley ayaa Cusbitaalka Gargaar Lagu Daweeyay + [Muuqaal ]	Featured
[ January 6, 2021 ] Wariyihii caanka ahaa ee BBC Soomaali oo ku geeriyooday London	Featured
[ January 6, 2021 ] Nuxurka Qodob Ay Ku Heshiiyeen Dalalka Khaliijka Carabtu + [ Muuqaal ]	Featured
Safiirka China Moqdisho U Fadhiya Oo Hargeysa Ka Degay
August 2, 2020 admin1
Safiirka Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha u qaabilsan Soomaaliya Amb. Qin Jian ayaa Sabtida Maanta booqasho ku yimid Caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Qin Jian ayaa waxa Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Hargeysa ee Cigaal kaga hor-tagay isla-markaana soo dhaweeyay Masuuliyiin ka mid ah Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Somaliland, kuwaasi oo u soo galbiyey gudaha Caasimadda, sida loo sheegay Geeska Afrika.
Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo Fadhigiisu yahay Magaalada Muqdisho ayaan ujeeddada socdaalkiisa la ogayn, laakiin Socdaalkiisa ayaa ku soo beegmaya bil uun ka dib markii Dawladda Somaliland si rasmiya u shaacisay inay xidhiidh la samaysay Taiwan oo Shiinaha ka go’day, arrintaasi oo uu Shiinuhu aad uga cadhooday.
Mr. Qin Jian ayaa si khaas ah Baraha uu Bulshada ku leeyahay, gaar ahaan Twitter-ka ku baahiya hadallo uu ku muujinayo sida Dawladdiisu uga horjeeddo xidhiidhka Somaliland la samaysay Taiwan, sidoo kalena sidii xidhiidhkaa loo curyaamin lahaa kulamo kala yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Illaa hadda lama oga in Safiirku arki doono Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo in kale.